Tsy mety mirotsaka ny orana: atahorana ny fambolem-bary any Alaotra | NewsMada
Tsy mety mirotsaka ny orana: atahorana ny fambolem-bary any Alaotra
“Toa hoatra ny ho ratsy, tsy hety ny asam-pambolena amin’ity fotoam-pahavaratra ity ?”.
Izany ny teny averimberin’ny tantsaha any Alaotra, ankehitriny. Antony, tsy nirotsaka hatramin’izao ny orana any Alaotra ka nanatanteraka ny fomban-tany, “joro orana”, ny zoma 23 novambra teo tany Andilamena, nanao ny “Asarabe” izy ireo.
Tany Ambohibary indray, ho an’ny manodidina ny farihin’Alaotra, ho an’ny ilany avaratra; tany Andrangorona sy Ambatosoratra, ho an’ny afovoany; tany Amboasary, ho an’ny ilany atsimo ary tany Ankitsika-Tanambe, ho an’ny any andrefana.
Tsy nifampilaza akory ireo vahoaka isan-toerana ireo fa nifanojo tamin’io daty io ny fanapahan-kevitry ny isan-toerana. Ary taorian’ny hetsika “Feraomby” natao tao Anororo izany rehetra izany.
Hatao toy ny karatra isan-dahy
“Hisy ny orana fa ho latsaka miohatra ny tamin’ny taon-dasa”, hoy ireo nanatrika ny “joro”.
Nanamarika ny mpampianatra iray fa “tsy ilay lafiny finoana fotsiny no mila dinihina mikasika ity haintany mihatra aty Alaotra ity fa mila alefa lavidavitra kokoa ny fandinihana sy ny fisainana. Indrindra ho an’ireo milaza fa “mpanao politika”, manana vinam-piarahamonina. Tsy mionona amin’ny filazana na fitenenana fa miaro ny tontolo iainana fa ilaina mihitsy ny fambolen-kazo sy ny fandrakofana ala ny tanindrazana. Mila hatao toy ny rafitra “karatra isan-dahy” taloha ny fambolen-kazo.
Nilaza kosa ny mpamboly iray any amin’ny faritra PC 15 fa tokony hampiasaina amin’ny famantarana ny toetr’andro ny teknolojia vaovao, ahafahan’ny tantsaha miomana amin’ny famboleny.
Misy ny tetikasa fanamafisana ny fiatrehana ny fiovaovan’ny toetr’andro (PRCCC), mikasika ny toetr’andro, koa andrasana ny vokany.
Mangatany – RN1: il écoule des faux billets sur le marché 22/09/2021